Deg deg:-Gudoomiyaha Ururka Solja oo Xaqiijiyey Xayiraada Talefishanka HCTV iyo xadhiga wariye Cabdiqaadir Coday + Akhriso faahfaahinta - Haldoornews | Haldoornews
Deg deg:-Gudoomiyaha Ururka Solja oo Xaqiijiyey Xayiraada Talefishanka HCTV iyo xadhiga wariye Cabdiqaadir Coday + Akhriso faahfaahinta
Ururka SOLJA, waxa uu xaqiijinayaa inay maanta ciidanka Booliisku xidheen C/qaadir Saleebaan Casayr isla markaanna xukuumaddu xayiraad saartay Telefishanka HCTV, wallow aanay illaa hadda xukuumaddu wax talaabo ah qaadin.
Wararka sheegaya xadhiga wariye Xasan Galaydh waxba kama jiraan, sida uu Xasan Galaydh noo xaqiijiyay.
Ururka SOLJA, waxa uu u arkaa talaabadda ay xukuumaddu qàaday mid ka hor imanaysa sharciga iyo Heshiiskii dhawaan laga gaadhay dacwadaha saxaafadda.
SOLJA, waxay u aragtaa xukuumaddu inaanay u adeegsan xadhiga suxufiyiinta iyo hay’addaha saxaafadda dariiq aan sharci ahayn.
Suxufiyiinta iyo hay’addaha warbaahinta ururka SOLJA, waxay ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan wararka iyo Barnaamijyadda abuuri karra xaalad Amni darro ama ka hor imanaya danta qaranka, si aan loogu helin danbi.
Ururka SOLJA, oo ay shaqadiisu tahay difaaca, horumarinta Saxaafadda iyo kobcinta dimuquraadiyadda suuban iyo xoriyatul qawlka waxa u arkaa talaabo kasta oo qaldan oo ka timaada Saxaafadda iyo xukuumadda inay dhaawacayso jiritaanka, Sumacada, deganaanshaha bulshada reer Somaliland, sidaas daraadeed loo baahan yahay in laga foojignaado.
Ururka SOLJA, waxa uu xukuumadda iyo dadka wax garadka ee reer Somaliland iyo hay’addaha Dastuuriga ah ugu baaqayaa in khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka taagan wadahadal iyo is af-garad sida ugu dhakhsaha badan loogu dhameeyo oo aan la sii eegan inta ay xaaladdu murgayso.
SOLJA, waxay ka walaacsan tahay wararka dhiiladda leh ee ay is dhaafsanayaan siyaasiyiinta Somaliland ee kursiga kala riixanayaa ee awooda isku muquuninayaa ee ay warbaahintu baahinayso, kuwaas oo walbahaar ku abuuray guda iyo dibed ba dadweynaha Somaliland.